English လို အားနာတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲ? by Sayar Nyein Chan Aung ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
English လို အားနာတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲ? by Sayar Nyein Chan Aung
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Wednesday, June 03, 2015 TrustEgnlishLesson No comments
TRUST - English lessons မှ ကူးယူဖော်ပြသည်
English လို အားနာတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲ?
Native Speakers of English နဲ့ ကျွန်တော်တို့လို Non-Native Speakers တွေဟာ ယဉ်ကျေးမှု မတူတဲ့ အတွက် အားနာတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပုံနဲ့ အားနာတာကို ပြောပုံကွာ ခြားပါတယ်။
အားနာတယ်ဆိုတာကို လူအမျိုးမျိုး က ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ English လိုပြောကြပါ တယ်။ တစ်ချို့က compunction, hesitation, reluctance တို့စသဖြင့် (noun) တွေကို သုံးပြီးပြောတယ်၊ တစ်ချို့ကျတော့ feel bad ဆိုတဲ့ phrasal verb ကိုသုံး ပြောကျတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ထိုစာလုံးတွေသုံးတာ မှန်တယ် မှားတယ်ဆိုတာထက် ကျွန်တော် English စာကို Native Speakers တွေနဲ့ စကားတွေပြောတဲ့အခါ တစ်ချို့အခြေအနေတွေမှာ သူတို့တွေ မြန်မာလို “အားနာလိုက်တာ” လို့ပြော မယ့်နေရာတွေမှာ ဘယ်လို စာကြောင်း စကားလုံးတွေ သုံးလဲ ဆိုတာကို သတိထားလေ့လာတယ်။
ဒါမှလဲ ကိုယ်ကပြောတဲ့ အခါ English Speaking သည် ပို ပြီး natural သဘာဝကျပြီး Native Speakers တွေနဲ့ communicate လုပ်တဲ့အခါ သူတို့ တွေသုံးနေကျ Phrase တွေ Pattern တွေဖြစ်ပြီး easy to understand ဖြစ်မှာ မိုလို့ပါပဲ။
၁) အိမ်လည်သွားလို့ ဧည့်ခံတဲ့ မုန့်တို့ ကော်ဖီ အအေးစသည်တို့ကို အားနာလို့ မထိမတို့မစားပဲ နေနေပါက။ “အားမနာ ပါနဲ့ ယူစား/ထည့်စားနော်။ ကိုယ့်အိမ်လိုသဘောထားပါ” ဟုမြန်မာလိုအားနာတဲ့အခါ ပြောလေ့ ရှိပါတယ်။
“Don’t be shy. You can help yourself. Feel free to make yourself at home.”
ဤအခြေအနေ situation မျိုးတွင် Don’t be shy. ကို ရှက်မနေပါနဲ့လို့ တိုက် ရိုက်ပြန်မဲ့ အစား “အားမနာပါနဲ့” သဘောနဲ့
You can help yourself. ကို “အားမနာပါနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ထည့်စားနော်”
Feel free to make yourself at home ကို “အားမနာနဲ့ ကိုယ့်အိမ်လိုသဘောထားနော်”
၂) အိမ်မှာ နေ့လည်စာစားပြီးမှ ပြန်လို့ပြောပါက၊ “အားနာစရာကြီး ဒုက္ခမပေးချင်ပါဘူးဗျာ” ဟုမြန်မာလို အားနာတဲ့အခါ ပြောလေ့ ရှိပါတယ်။
“You must stay for lunch.”
“Well, thanks, but I don't want to impose on you.”
ဤအခြေအနေ situation မျိုးတွင် I don’t want to impose on you. သည် “အားနာစရာကြီး မင်းကို ဒုက္ခမပေးချင်ပါဘူး” ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ သုံး သွားခြင်းဖြစ်သည်။
၃) အိမ်လာလည်တာ မုန့်တွေ လက်ဆောင်တွေအများကြီးဝယ်လာတဲ့အခါ “အားနာစရာကြီး သက်သက် ဒုက္ခရှာလို့ဗျာ” ဟုမြန်မာလို အားနာတဲ့အခါ ပြောလေ့ ရှိပါတယ်။
“Oh my God, you boughtalot.” “Thanks, but you didn't have to/ you shouldn't have.”
ဤအခြေအနေ situation မျိုးတွင် You didn't have to. (သို့) You shouldn't have သည် “အားနာစရာကြီး သက်သက် ဒုက္ခရှာလို့ဗျာ” သဘောမျိုးနဲ့ သုံးသွားခြင်းဖြစ်သည်။
(မှတ်ချက်။ ။ ၀ယ်ခဲ့ပြီးသောအရာများကို (အတိတ်) ဖြစ်သောကြောင့် didn't have to (သို့) should not have done ကို (done) ကိုဖျောက်ထားကာ သုံးရခြင်းဖြစ်သည်။)
Native Speakers တွေ English လိုပြောရာတွင် အားနာတယ်ဆိုတာ (သို့) အားနာတယ်ဆိုတာနှင့် တော်တော် ဆင်သောခံစားမှုကို မည်သို့ သုံးကာပြောသည်ကို အတုယူပြီး (in the same or similar situations) ထိုအခြေအနေများ (သို့) အလားတူ အခြေအနေများတွင် မိမိ၏အားနာတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုကို ထိထိမိမိ မှန်မှန်ကန်ကန် English လို ပြောနိုင် ရေးနိုင်ကြပါစေ။
Ko Nyein Chan Aung.
English Speaking – Job Expressions (14) by Sayar W...
English Dialogs (27) By Sayar WinNaingOo
English Speaking - Job Expression (13) by Sayar Wi...
ဇူလှိုင်လ၂၆ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့အထိ ဆရာထွန်း၏ ...
iMobile IQX Ken Full Root Firmware တင်နည်း
lollipop myanmar font tools
မနေ့က တင်ပေးတဲ့အသံချဲ့ Apk ထက်၂ဆသာတဲ့ ..>>>ဖုန်းအသ...
ဖုန်း Screen ထထလင်းနေတဲ့ error...
Easy Uninstaller App Uninstall v3.0.2 Apk
Selfie ပုံလှလှလေး ရိုက်ချင်သူများအတွက်..BeautyCam ...
ဖုန်းကိုပေါ့ပါးသွက်လက်စေမယ့် - Avira Android Optim...
မန်မာ့ဆန်ကို သဘောတူ ထားတဲ့ အတိုင်း တရုတ် မဝယ်
အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခ သတ်မှတ်
Adobe Premiere Pro CC 2015 (v9.0) RUS-ENG (Full)
Adobe After Effects CC 2015 (v13.5) RUS-ENG (Full)...
ကုပ္မဏီများ ရုံးများ အိမ်ဆိုင်များ အတွက် စာရင်အင်းေ...
Java လေ့လာနေသော နည်းပညာသမားများအတွက် သင်ထောက်ကူ စာ...
Programming လေ့လာလိုသော သူများအတွက် Bat ဖိုင်ရေးနည...
System Engineer or Game Developer တွေအတွက်လေ့လာဖို...
Programming လေ့လာလိုသူများအတွက် C++ မြန်မာလို့ စာအ...
ဆေးသောက်စရာမလိုဘဲ ခေါင်းကိုက်ပျောက်စေမယ့် နည်းလမ်း...
နားသန့်ရှင်းရေး လုပ်ရန် သိထားသင့်သော အချက် (၇) ချက...
ယခုချက်ချင်း　လုပ်သင့်သော ဘဝအတွက် ၂၇ ချက်
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး တပ်ချုပ်က ဒေါ်လ...
ရေကူးကန်မှာ မျက်စိနီတာ ကလိုရင်းကြောင့် မဟုတ်၊ ရှူရ...
ဖုန်းထဲမှာ ပဋ္ဌာန်းတွေကို နားထောင်နိုင်မည့် Myanmar ...
ဖုန်းထဲက ဗိုင်းရပ်တွေကို ရှင်းလင်းပေးမယ့် - PSafe ...
Cambridge Essential Grammar in use (ebook နှင့် CD...
ဖုန်းမှာ ဂစ်တာ Chords တွေကိုသိရှိနိုင်မယ် - Guitar...
Internet Download Accelerator Pro 6.5.1.1471 Seria...
SYBERIA2– FULL GAME ဆော့ကျမယ်
ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ network ပိုင်းကို လေ့လာကြည့်ရင် သိ...
အောင်မြင်နေသူများရဲ့ အရည်အချင်း သို့မဟုတ် ဓလေ့စရို...
"သင့်သည် ၊ မသင့်ဘူး ၊ သင့်လား ၊ မသင့်ဘူးလား " လို့...
၀ိဘတ် ( Preposition )များ
ပရင့်တာ (ပုံနှိပ်စက်) မှာ ဘာကမှားနေသလဲ ဘာကပျက်နေသလ...
ကျောင်းသား ၃၀၀ ကို ပညာသင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆိုက်က...
ဇူလိုင် ၂၀ရက်မှစ၍ မြ၀တီ-ကော့ကရိတ်လမ်းပိုင်းတွင် လက...
How to Register Thai Sim Card with Your Android Up...
သဖန်းသီးရဲ့ အံ့မခန်းဖွယ် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးမ...
ယောင်္ကျားတိုင်းသိချင်ကြသည့် မိမိယူမဲ့ မိန်းကလေးအပျိ...
♪ အမြန်ဆုံးဖုန်းဖြစ်လာသည့်် Samsung Galaxy S6 ♫
♪ Microsoft ၏ ရုံခါမှုက Windows 10 ကို မိုဘိုင်းလ်အ...
♪ တစ်ကမ္ဘာလုံး အခမဲ့ Wifi သုံးနိုင်မယ့် Google ရဲ့ ...
♪ ဘာပဲလိုလိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာသိရှိနိုင်မယ့် - Myanm...
Computer ဆိုင်ရာနည်းလမ်းများစာအုပ်စုစည်းမှု ( Pdf ...
ဘလော့ဆိုင်ရာနည်းပညာစာအုပ်များ စုစည်းမှု ( Pdf Down...
၃၈ ဖြာမင်္ဂလာတရားတော်...apk လေးပါနော်..
ဖိုင်ရှယ်ယာရာတွင် အလွယ်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံး Zapya for ...
ဘထ္ထရီအားအကုန်မြန်နေသူများဆောင်းထားရန်-GO Battery S...
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူများအတွက် Interchange Level 2/Bo...
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူများအတွက်...Interchange Level3...
English Grammar Book apk for Android Phone
Zapya ကူးရင် ကူးလို့မရ Failဖြစ် မန်မိုရီ ပြည့်တဲ့E...
Apks & Games တွေ Install လုပ်ရင် Out of Space ပြသာ...
ram နည်းတဲ့ phone ကို application အမျာကြီးဘယ်လိုသွ...
Meeting မှာအင်္ဂလိပ်စကါးပြောနည်း စာအုပ်နှင့် CD
အိပ်ယာဝင် နောက်ကျသူများ အိပ်ရေးပျက်သူများအတွက် အကြ...
ညီမင်းခိုင် – လက်ခံမှာလား
English Speaking – Job Expression (12) By Sayar Wi...
Low Back Pain ခါးနာ သက်သာစေရန်
အသက် ၃၀ မှာ သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
2015 apk အလန်းများစုစည်းမှု
AOMEI Partition Assistant Professional & Server & ...
အလုပ်မှာ သတိထား လုပ်ဆောင်ရမယ့် အမှန်တရား ၅ ချက်
ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော် ၂၄ ပစ္စည်းဆုတောင်း
လက်မကို နေ့တိုင်း နှိပ်ပေးပါ
အပြင်းအထန် စာကျက်ဖို့ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။ ...
Subject နဲ့ Verb ညီမျှအောင် တွဲဖို့ By Sayar WinN...
English Speaking _ Job Expressions (11) By Sayar W...
ကိုယ် မင်းဆီက ဘာသံမှ မကြားရတာ အတော်ကြာသွားပြီ By S...
English Speaking - Job Expression (6) By Sayar Win...
သွေးလွန်တုပ်ကွေး နဲ့ လူ ၄၀ သေဆုံး
Adobe Photoshop CC 2015 FULL Portable
ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ စကားစပ်မိပြီးတေ...
၃၁ ဘုံမှာ သတ္တဝါ တွေ ဘာကြောင့် မကုန်နိုင် တာလဲ
ဗုဒ္ဓဝါဒ နှင့် ဟိန္ဒူအယူဝါဒ ကောက်နုတ်ချက်
နောင် ပွင့်တော်မူမည့် Aramaedaeya မြတ်စွာဘုရား သမိ...